Hazvigone maringe Nekusada | Martech Zone
Hazvikwanise maringe Nekusada
Chipiri, Mbudzi 30, 2010 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini ndakatsaura akawanda ematambudziko andakawana mumabhizinesi ku haigoni ne haidi. Ndinoda kushanda pamwe haigoni. Ndinovenga kushanda pamwe haidi.
Hazvigone zvinogona kureva zvinhu zvakawanda. Hazvigone zvinogona kukonzerwa nezviwanikwa, mirau, dzidzo kana masimba. Paunenge usati waita chinangwa nekuti haigoni zviitwe, hauna kutadza… chinhu akapinda munzira. Ukangobvisa mugwagwa, unozobudirira.
Hazvidi zvakasiyana. Hazvidi inotungamira mukundikana. Hazvidi zvinoitika nekuda kwekutya, kuzvitutumadza, kudada, husimbe kana kusataurirana zvakanaka. Hazvidi zvinoreva kuti chinangwa chaigoneka, asi mumwe munhu akapinda munzira.
Mumazuva angu ekutanga samaneja, ini ndaigara ndichipikiswa nemubvunzo we haigoni ne haidi nevashandi vangu. Kusaziva kuti nyaya yacho yanga iri a haigoni kana haidi zvakaita kuti ndichere zvakadzika nemushandi kuti ndione kuti sei tisina kubudirira.
Ini ndaigara ndichishamisika kuwana vashandi vaida kubudirira, asi vakatadza nekuda kwekupokana kwechitatu. Dzimwe nguva ndaishamisika nekuti ndini ndaive chinhu munzira. Kana tangobvisa kupindira, taigara tichihwina.
Kana icho chinangwa chisina kuzadzikiswa nekuda kwe haidi, maitiro acho aive akasiyana zvakanyanya. Ava vaive vashandi vaida kubviswa nekuti ivo kwaive kupindira uye mugwagwa wekubudirira.
Nyaya haina kuchinja nemakambani. Kune makambani ayo haigoni uye avo ndivo vatengi vedu vakanaka. Tinogona kuvapa zviwanikwa, zano uye dzidzo uye nekuvabatsira kupaza. Nehurombo, isu takasanganawo nemakambani avo haidi. Ivo haidi teerera, ivo haidi chinja, ivo haidi shandisa izvo zvinodiwa zviwanikwa, kana ivo haidi nekuti vanofunga kuti vanoziva zvirinani.
We haigoni batsira makambani ayo haidi.
Tags: bhizinesi kumutengiwepasi rose magariro enhauKushambadzira MabhukuTsvaga Kutengesauberflip hubmavhidhiyo ekushambadzira manhamba
Rufu rweSangano reRekodhi